China mpo indle Pump abakhiqizi nabaphakeli | IKAIQUAN
Uchungechunge lwe-WL lwamaphampu endle amancane amile mpo asetshenziswa kakhulu kwezobunjiniyela bakamasipala, ekwakheni izakhiwo, ezindle zendlu kanye nasekwelashweni kwendle. Zingasetshenziselwa ukukhipha indle, amanzi angcolile, amanzi emvula kanye nendle yasemadolobheni equkethe izinhlayiya eziqinile kanye nemicu emide eyahlukahlukene.
Ukugeleza: 10-4500m3 / h
Inhloko: Kuze kufike ku-54m 3. Ukushisa Kwamanzi ＜ 80ºC ，
Ubuningi be-Liquid: ≤1 050 kg / m3
Izinga loketshezi akumele libe ngaphansi kune: Uphawu oluthi “▽” luboniswe kumdwebo wobukhulu bokufakwa.
Iphampu ayikwazi ukusebenzisa ukuphatha uketshezi ngokugqwala okuqinile noma izinhlayiya eziqinile.
Ububanzi bezinto eziqinile kuketshezi abudluli kuma-80% osayizi wesiteshi wokugeleza ophansi wepompo: Ubude beketshezi kufanele bube buncane kunobubanzi bokukhishwa kwepompo.
WL (7.5kw-) Series Kuqondile Indle Pump CN
WL (11kw +) Series Kuqondile Indle Pump CN
Kuqondile Indle Pump Izinzuzo:
1. I-designe eyingqayizivele yokuphehla kweziteshi ezimbili, umzimba wepompo obanzi, okulula ukudlulisa izinto eziqinile, i-fiber akulula ukuyifaka, elungele ukuthuthwa kwendle.
2. Igumbi lokufaka uphawu lisebenzisa ukwakheka kwesakhiwo esivunguza, okungavimbela ukungcola kwendle ekungeneni kuphawu lomshini ngezinga elithile; Ngasikhathi sinye, igumbi lokufaka uphawu linedivayisi ye-valve yokukhipha. Ngemuva kokuqalwa kwepompo, umoya osekamelweni lokufaka uphawu ungasuswa ukuvikela uphawu lomshini.
3. Iphampu inesakhiwo esiqondile, esihlala endaweni encane; I-impeller ifakwe ngqo kushaft yemoto, ngaphandle kokuhlangana, ipompo inesayizi emfushane isiyonke, isakhiwo esilula, okulula ukusigcina; Ukucabangela kokuthwala okunengqondo, i-cantilever emfushane emfushane, isakhiwo se-axial force balance, yenza ukuthwala nophawu lomshini kuthembeke ngokwengeziwe, futhi ipompo isebenza kahle, umsindo wokudlidliza mncane.
4. Iphampu lifakwe ekamelweni lepompo elomile ukuze kube nokugcinwa okulula.
5. Ngokuya ngezidingo zabasebenzisi, ingafakwa ikhabethe lokulawula ugesi kanye noshintsho lokugeleza ketshezi lwamanzi, olungakwazi ukulawula ngokuzenzakalela ukuqala nokumisa kwepompo ngokuya ngokushintsha kwezinga liketshezi, ngaphandle kokuqondiswa okukhethekile , kodwa futhi nokuqinisekisa ukusebenza okuphephile nokwethembekile kwemoto, okulula kakhulu ukuyisebenzisa.
Langaphambilini I-XBD Yokucima Umlilo Pump
Olandelayo: Ukugaya Impompo Yendle Engaphansi
Umdwebo Wokwakheka Kwempompo Yendle Eqondile
Umdwebo wempompo yendle ye-Spectrum mpo kanye nencazelo